Hapụ ngalaba gị maka ihe ị na-eme | Martech Zone
Hapụ ngalaba gị maka ihe ị na-eme
Mọnde, Jenụwarị 19, 2009 Tuesday, October 7, 2014 Douglas Karr
Mmadu ole na acho onye ma ihe ị na-eme? Ugbu a… mmadụ ole na-achọ n'ezie maka gị?
Ya mere… ọ bụrụ na-ịchọrọ ka ịchọta gị na onntanetị maka ihe ị na-eme, gịnị mere ị ga-eji zụta aha gị dị ka ngalaba aha ma tinye blog na ya? E nwere ike ị gaghị achọ. Zụrụ ngalaba aha nke na-ebu ụzọ gosipụta ihe ị na-eme. Ruo mgbe ndị mmadụ mara onye ị bụ, otu a ka ha ga esi achọta gị.
Mgbe ị nwetara ọdịnaya zuru ezu na ịgbaso, Google ga-elekọta na-ekwe ka ha chọta gị.
Tags: iwe iwenlele emailMmetụta iziziajụjụ_postsiweyegov
Onye na-ejide mmanụ gị?
Youchọghị Onye Ọkachamara SEO!
Jan 19, 2009 na 12: 34 AM
Nnukwu ndụmọdụ. Echere m na m nwere ike ikpebi ime otu ihe a. Ma eleghị anya, ọ na-achọ iwulite onwe m "ika" ma ọ bụ naanị eziokwu ahụ bụ na m hụrụ ka ndị ọzọ na-eme ya! Eme ka m na-eche ugboro abụọ! Daalụ maka ihe ịma aka post!
Ndụmọdụ dị ukwuu Doug. Nke a bụ eleghị anya ndụmọdụ mbụ m ga-enye onye ọ bụla na-etinye weebụsaịtị. Ihe Nlereanya… ma ọ bụrụ na ị na-ere popcorn na aha ụlọ ọrụ gị dị ka Natural Harvest ma ọ bụ ihe yiri ya. Na-ewere aha ahụ http://naturalharvest.com ga-abụ a n'ezie ọjọọ echiche si ahịa si ele ihe anya. Ọ ga-aba uru karịa http://popcorn.com . Ekwenyesiri m ike na ejiri URL abụọ ahụ, mana ị nwetara echiche ahụ.
Jan 19, 2009 na 11: 53 AM
Enwere m nsogbu na nke a mgbe mbụ m malitere itinye saịtị m. M kpebiri na m na-aga na "Gịnị" kama nke "M" n'ihi na m maara na m achọghị ka ọ na-abụ a ebe m ka lifecast, kama kama a akụ maka ndị ọzọ. Echere m na nke ahụ bụ ihe dị mkpa na usoro atụmatụ ahụ. Ndụmọdụ gị dị mfe ma nwee nghọta zuru oke!
Jenụwarị 19, 2009 na 3:58 PM
Ekwenyere m, Aghọtara m ihe kpatara na ndị mmadụ nwere ike chọọ ịzụta aha ha, mana belụsọ ma inwere ikike aha ugbua, gịnị bụ isi? URL gị kwesịrị igosipụta ụdị saịtị / blọọgụ ọ bụ na ihe ndị na-agụ nwere ike ịtụ anya.